Ahoana ny fomba fampiasanao ny fanadihadiana Attribution ho an'ny Insight Marketing matanjaka kokoa | Martech Zone
Ahoana ny fomba fampiasanao ny fanadihadiana Attribution ho an'ny Insight Marketing matanjaka
Alakamisy 5 martsa 2015 Alakamisy 5, 2015 Douglas Karr
Ny isan'ny teboka ifandraisana izay ifandraisanao amin'ny mpanjifa - sy ny fomba fihaonany amin'ny marikao - dia nipoaka tato anatin'ny taona vitsivitsy. Taloha, ny safidy dia tsotra: nanao dokambarotra pirinty ianao, dokambarotra fampielezam-peo, mailaka mivantana, na fitambarana sasany. Androany dia misy ny fikarohana, fampisehoana an-tserasera, media sosialy, finday, bilaogy, tranokala mpanangona, ary mitohy ny lisitra.
Miaraka amin'ny fiparitahan'ny teboka mikasika ny mpanjifa dia nitombo ny fandinihana ny fahombiazany. Inona no tena sandan'ny dolara lany amin'ny mpanelanelana rehetra? Inona no mpanelanelana manome anao ny tena mahery indrindra? Ahoana no ahafahanao manatsara ny fiatraikany mandroso?
Tamin'ny lasa indray dia tsotra ny fandrefesana: nandefa doka ianao ary nandinika ny fahasamihafana eo amin'ny lafiny fahatsiarovan-tena, fifamoivoizana ary fivarotana. Androany, ny fifanakalozana doka dia manome fahitana momba ny isan'ny olona nanindry ny doka nataonao ary tonga amin'ny toerana tianao haleha.
Fa inona no mitranga avy eo?
Ny famakafakana Attribution dia afaka manome ny valin'io fanontaniana io. Izy io dia afaka mampivondrona angona avy amin'ny loharano tsy mitovy amin'ny ao anatiny ho an'ny orinasanao sy ivelany raha ny momba ny fanentanana ny mpanjifa. Izy io dia afaka manampy anao hamantatra hoe iza amin'ireo fantsona no mahomby indrindra amin'ny famokarana valiny. Ny tena zava-dehibe dia afaka manampy anao hamantatra ireo mpanjifanao tsara indrindra ao anatin'io vondrona io izy ary hanao zavatra mifanaraka amin'izany fampahalalana izany amin'ny alàlan'ny fanovana ny paikadim-barotrao mandroso amin'izay.
Ahoana no ahafahanao mampiasa famakafakana fanamarihana mahomby sy mijinja ireo tombony ireo? Ity misy fanadihadiana fohy momba ny fomba nanaovan'ny orinasa iray azy:
Ny tranga fampiasana ny famakafakana Attribution
Orinasa mamokatra finday dia mivarotra fampiharana izay mamela ny mpampiasa hamorona, handinika ary hizara antontan-taratasy avy amin'ny fitaovana rehetra. Tany am-piandohana dia nampihatra ny antoko fahatelo ny orinasa Analytics fitaovana miaraka amin'ny dashboard efa namboarina mba hanarahana metrika fototra toy ny fampidinana, isa isam-bolana / isan'ny mpampiasa, fotoana lany amin'ny fampiharana, isan'ny antontan-taratasy noforonina, sns.
Ny haben'ny Analytics iray dia tsy mifanaraka amin'ny rehetra
Rehefa nipoaka ny fitomboan'ny orinasa ary nitombo an-tapitrisany ny isan'ny mpampiasa azy, tsy nitombo io fomba fiasa iray io. Antoko fahatelo Analytics Ny serivisy dia tsy nahatanty ny fampidirana ireo angon-drakitra tena izy avy amin'ny loharano marobe toy ny lozisialy lozisialy, fifamoivoizana an-tranonkala ary fanentanana doka.
Ankoatr'izay, ny orinasa dia mila mamakafaka ny famaritana amin'ny sehatra maro sy fantsona maro hanampiana azy ireo hanapa-kevitra hoe aiza no ahazoana mandanjalanja ny dolara fanampiny manaraka ho an'ny mpanjifa vaovao. Ny tranga iray mahazatra dia ity: ny mpampiasa iray nahita ny doka Facebook an'ny orinasa nandritra ny telefaonin'izy ireo, avy eo nitady hevitra momba ilay orinasa tamin'ny solosaina findainy, ary tamin'ny farany dia tsindrio raha hametraka ilay fampiharana avy amin'ny doka aseho amin'ny takelaka misy azy ireo. Ny fisoratana anarana amin'ity tranga ity dia mitaky ny fizarana ny trosa amin'ny fahazoana an'io mpanjifa vaovao io amin'ny tambajotra sosialy amin'ny finday, fikarohana / famerenana karama amin'ny PC ary doka fampisehoana anaty rindrambaiko amin'ny takelaka.
Ny orinasa dia mila naka zavatra lavitra ary nahita hoe iza ny loharanom-barotra an-tserasera nanampy azy ireo hanana ny mpampiasa sarobidy indrindra. Nila namantatra ny fihetsiky ny mpampiasa izy ireo - ankoatry ny hetsika Click-to-install mahazatra - izay natokana ho an'ny fampiharana ary nahatonga ny mpampiasa ho sarobidy tamin'ny orinasa. Tamin'ny andro voalohandohany, namorona fomba tsotra nefa mahery vaika ny Facebook mba hanaovana izany: hitan'izy ireo fa ny isan'ny olona "namana" mpampiasa ao anatin'ny andro maromaro nisoratana anarana dia mpaminany mialoha ny amin'ny fiezahana mpampiasa na sarobidy ho ela. Haino aman-jery an-tserasera sy antoko fahatelo Analytics ny rafitra dia jamba amin'ireo karazana hetsika tsy mandeha amin'ny laoniny sy be pitsiny mitranga ao anaty rindrambaiko iray.
Nila fanao izy ireo famakafakana fanamarihana manao ny asa.
Attribution analysis no vahaolana
Manomboka amin'ny fomba tsotra, ny orinasa anatiny dia namorona tanjona voalohany: ny mamantatra tsara ny fomba itadiavan'ny mpampiasa nomena ny fifandraisany amin'ny vokariny ao anatin'ny fotoana iray. Raha vantany vao tapa-kevitra izany, dia azon'izy ireo natao ihany koa ny nandefa an'io data io mba hamoronana fizarana mombamomba ny mpanjifa mifototra amin'ny satan'izy ireo amin'ny fandoavana mpampiasa sy ny vola laniana isam-bolana. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ireo faritra data roa ireo, ny orinasa dia afaka namaritra ny mpanjifa nomena lanja mandritra ny androm-piainana - metrika namaritra hoe iza amin'ireo mpanjifa no manana ny tombom-barotra betsaka indrindra. Io fampahalalana io indray dia namela azy ireo hikendry manokana ireo mpampiasa hafa - ireo izay nitana ny mombamomba ny “lanja mandritra ny androm-piainany” iray ihany - tamin'ny alàlan'ny safidin'ny haino aman-jery tena manokana, miaraka amin'ny tolotra tena manokana.
Ny vokany? Mahomby, fampiasana bebe kokoa amin'ny dolara marketing. Mitombo hatrany. Ary rafi-pamotopotorana manokana momba ny famaritana manokana amin'ny toerana izay mety hitombo sy hampifanaraka rehefa mandroso ny orinasa.
Fanadihadiana momba ny fanovana mahomby
Rehefa manomboka mandray anjara ianao famakafakana fanamarihana, zava-dehibe ny famaritana aloha ny fahombiazanao amin'ny fombanao manokana - ary ataovy tsotra. Manontania tena hoe, iza no heveriko fa mpanjifa tsara? Anontanio avy eo, inona ny tanjoko amin'ity mpanjifa ity? Azonao atao ny misafidy ny hampitombo ny fandaniana ary hanamafisana ny tsy fivadihana amin'ireo mpanjifanao avo indrindra. Na, azonao atao ny misafidy ny mamaritra hoe aiza no ahitanao mpanjifa sarobidy kokoa toa azy ireo. Anjaranao tokoa izany, ary inona no mety amin'ny fikambananao.
Raha fintinina, ny famakafakana ny famaritana dia mety ho fomba haingana sy haingana hanangonana tahirin-kevitra avy amina loharanom-baovao anatiny sy antoko fahatelo, ary hahatakatra an'io angon-drakitra io amin'ny teny izay voafarinao manokana. Hahazo ny fomba fijerinao ilainao hamaritana mazava tsara sy hahatratra ny tanjon'ny varotra ianao, avy eo hamafiso ny paikadinao hahatratrarana ROI avo indrindra azo atao amin'ny dolara marketing rehetra lany.
Inona no atao hoe Data Warehouse amin'ny serivisy
Vao haingana izahay no nanoratra momba ny fomba mirongatra ny teknolojia angona ho an'ny mpivarotra. Data Warehouse dia manome tahiry afovoany izay mizana ary manome fahitana lehibe momba ny ezaka varotra ataonao - ahafahanao mitondra tahiry mpanjifa, fifanakalozana, ara-bola ary ara-barotra marobe. Amin'ny alàlan'ny fisamborana angona an-tserasera, an-tserasera ary finday ao anaty tahiry fitaterana foibe, ireo mpivarotra dia afaka mamakafaka sy mahazo ny valiny ilainy rehefa ilain'izy ireo izany. Ny fananganana trano fanatobiana angona dia andraikitra mavitrika ho an'ny orinasa antonony - saingy ny Data Warehouse as a Service (DWaaS) dia mamaha ny olan'ny orinasa.
Momba ny BitYota Data Warehouse ho serivisy
Ity lahatsoratra ity dia nosoratana niaraka tamin'ny fanampian'ny BitYota. BitYota's Data Warehouse ho vahaolana amin'ny serivisy dia manala ny aretin'andoha amin'ny tsy tokony hananganana sy hitantanana sehatra data hafa. BitYota dia ahafahan'ny mpivarotra mampiakatra haingana ny trano fitahirizam-bokin'izy ireo, mifandray mora amin'ny mpamatsy rahona sy manamboatra ny trano fitahirizanao. Mampiasa ny teknolojia SQL amin'ny teknolojia JSON ny teknolojia hanontaniany mora foana ny trano fitahirizanao ary misy feed data data ho an'ny analytics haingana.
Iray amin'ireo tena manakana haingana Analytics dia ny filàna manova ny angona alohan'ny hitahirizanao azy ao amin'ny anao Analytics system. Ao anatin'ny tontolo iray izay miova tsy tapaka ny fampiharana, ny angona azo avy amina loharano maro, ary amin'ny endrika samihafa, dia midika fa matetika ny orinasa dia mandany fotoana be loatra amin'ny tetik'asa fanovana data na tarehy. tapaka Analytics rafitra. BitYota dia mitahiry sy mamakafaka ireo angona amin'ny endrika natoraly azy ka manala ny filàna fanovana data be dia be izay miasa mafy. Ny fanafoanana ny fanovana data dia manome ny mpanjifantsika haingana Analytics, malefaka indrindra, ary fahatokisana data tanteraka. BitYota
Rehefa miova ny zavatra ilainao dia azonao atao ny manisy na manala node avy amin'ny cluster anao na manova ny fikirakira ny masininao. Amin'ny maha vahaolana tantanana azy tanteraka, BitYota manara-maso, mitantana, manome ary mandanjalanja ny sehatra angon-drakitrao mba hahafahanao mifantoka amin'izay zava-dehibe - mamakafaka ny angon-drakitrao.
Tags: fanadihadianaAttributionfamakafakana fanamarihanabityotadata feedstrano fitehirizana datatrano fitehirizana angona ho serivisyfahitana ara-barotrafahana data amin'ny fotoana tena izy
Vahaolana tena izy hanatsarana ny fifandraisan'ny mailakao